PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-05-14 - IBaroka izingcwabe iphila ishaywa yi-Arrows
IBaroka izingcwabe iphila ishaywa yi-Arrows
Isolezwe ngeSonto - 2017-05-14 - EZEMIDLALO - EPrincess Magogo Stadium, KwaMashu
IZIGWAZE ngowayo iBaroka FC iphunyukwa yiphuzu ngemuva kokuthi umdlali wayo engene emhlabeni ongamfanele ngesikhathi owangakubo ekhahlela iphenathi nokuholele ekutheni unompempe uVictor Gomes wathi akulona igoli wanikeza i-Arrows ifreekick.
Iphenathi idaleke ngemuva kokuthi unozinti weLamontville Golden Arrows uNkosingiphile Gumede edlalise umdlali weBakgaga kabi ngaphakathi ebhokisini sekusele amanenjana esikhathi ebesengezwe unompempe.
U-Eric Hlaluka uvune uGomes ngesinqumo sakhe sokunganikezeli ngegoli ngenxa yesenzo somdlali wayo.
“Isigaba 14 somthetho olawula umdlalo webhola enkundleni uthi abadlali abangeni ebhokisini ngaphambi kokuthi umdlali okhahlela iphenathi esiyikhahlelile,” kusho uHlaluka.
Lapha umdlali weBaroka ungene engakakhahleli nokwenze uGomes wathi akulona igoli, kwagcina kunqobe Abafana Bes’thende ngo 3-2. Ukube leli goli belivunyiwe ngabe umdlalo uphele zibambene ngo 3-3.
Ukunqoba lo mdlalo kweGolden Arrows kuyibuyisele eqoqweni lamaqembu asethubeni lokuvula isizini ka-2017/2018 ngokubanga u-R8 million weMTN8.
I-Arrows inyukele endaweni yesikhombisa ngokunquma iBaroka FC ngo 3-2 emdlalweni we-Absa Premiership ePrincess Magogo Stadium, KwaMashu, izolo ntambama.
Igoli lokuqala le-Arrows lishaywe wuSiphelele Magubane ngomzuzu ka-40 nokwenze zaya ekhefini ihamba phambili.
Elesibili libhakuziswe enethini uLerato Lamola ngomzuzu ka-74 kanti ubeseyibuyisela phambili i-Arrows kwazise iBaroka ibisithole elokulinganisa ngonyawo lukaVictor Letsoalo ngemuva kokudidizela kwezitobha zikaClinton Larsen.
Kuphele imizuzu emithathu ngemuva kwegoli likaLamola waqhamuka uKudakwashe Mahachi washayela i-Arrows elesithathu.
Kungenzeka igoli likaMahachi libange isicoco savelele enyangeni.
Ubuyile uLetsoalo wavalela elesibili leBaroka ngomzuzu ka-87 kwathi ngomzuzu ka-90 uGomes wabeka iphenathi ekhalise abalandeli yadida wonke umuntu.
URichard Matloga uyinembile leyo phenathi kodwa akangayibala uGomes nokunezezele ukudideka okuhambisana nenjabulo kubalandeli be-Arrows.
Kungenwe kulo mdlalo womabili amaqembu ewadinga kakhulu amaphuzu kunezinye izimbangi zawo.
IBakgakga ibidinga ukusuka emsileni ishiye iChippa United engene esihibeni ijuqwa yiHighlands Park ngo 1-0 ngoLwesihlanu ebusuku.
Kwi-Arrows akuyona yodwa i-Top 8 esemiqondweni kodwa nesicoco seNedbank Cup kwazise yibo Abafana Bes’thende abathwele amathemba eKwaZuluNatal kule nkomishi.
Bazobe beyidinga yonke iKZN ngemuva kwabo uma sebesingethe i-Orlando Pirates kwi-semi final ngoMeyi 21 khona ePrincess Magogo.
Okubalulekayo ngesimo somdlalo wayizolo wukuthi izinga beliphansi kunalokhu osekujwayele ukwenziwa yi-Arrows KwaMashu.
Namakhaza abeshubisa umnkantsha kangangoba inkundla ibishaya ngesigejana sabalandeli abakhombise ukuba ngamadelakufa belokhu beyibize njalo i-Arrows.
Bakhombisile ukulazi iqembu labo sebeculela u-Andile Fikizolo bemfisela usuku olumtoti lokuzalwa.